ဆုတောင်းဥယျာဉ် (ရန်ကုန်) 2016
ဝိညာဉ်ရေးအတွက် အားလပ်ချိန်မှာ ဘယ်နေရာကိုသွားရမလဲ စဉ်းစားနေသူများ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ထောင်ဝတ်ပြုပွဲနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ တချို့ အောက်ဂိုး အပြင်စိတ်ဝင်စားသူတွေတော့ ရန်ကုန်မြို့ဆိုရင် ကန်တော်ကြီး၊ အင်းယားကန်၊ သံလျှင်သင်္ဘောစီးခရီး စသဖြင့် လိုက်ထရပ်ကားလေးနဲ့ဖြစ်စေ၊
Read more: ဆုတောင်းဥယျာဉ် (ရန်ကုန်) 2016
အတွင်းငြိမ်သက်ခြင်း (ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်း Sermon)
ပန်းတုံးတိုင်ဟူသည် အနာဂါတ်၌ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်သည့် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ လူသည် ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့ ဦးစွာပထမ ပညာရှာကြသည်။ ပညာစုံသည့်အခါ ဒုတိယ စီးပွားရှာကြသည်။ ထို့နောက် တတိယအရွယ်၌ တရားရှာကြသည်။ လူ့ဘဝ အသက်တာကို အချိုးကျခွဲပါက တချို့က ပညာရှာ၊ တချို့က
Read more: အတွင်းငြိမ်သက်ခြင်း (ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်း Sermon)
Read more: Our Daily Bread Audio Facebook. Welcome... မုရန်...
အိုင်တီနည်းပညာခေတ်နဲ့ ရသစာပေအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရသစာပေ ဆိုတာ လူတွေရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလူအများစု လက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ ရသစာပေအဖြစ် ကဗျာအရသာ ခံခြင်းတွေ ဆွေးနွေးတာ နားထောင်ရပါတယ်။ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုးရဲ့
Read more: ဘုရားသခင်နှင့်ကံတရား (အပိုင်း-၂ ရသစာပေ)
ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု 26.06.2016 Our Daily Bread
26.06.2016 Our Daily Bread
ဖတ်ရန်: ၁ ပေ ၃း၇-၁၂ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ယောဘ ၅-၇၊ □ တ ၈း၁-၂၅
ထိုနည်းတူ၊ ယောက်ျားတို့၊ ဆုတောင်းခြင်းအမှု၌ အဆီးအတား မရှိစေခြင်း ငှာ၊ ... အမွေခံရသော သူချင်းကဲ့သို့၊ သတိပညာနှင့် လျော်စွာ ကိုယ်ခင်ပွန်းနှင့် အတူ နေ၍ အားနည်းသောသူကို
Read more: ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု 26.06.2016 Our Daily Bread
ကျန်ုပ်တို့ဆုတောင်းရန်မလိုသောနေ့ဟူ၍ မရှိပါ။ သက်သေခံချက်..KL Nuam
Testimony by Ko Win Zaw Oo.
ကံတရား နဲ့ ဘုရားသခင် (၁)